The Honor X10 bụ ọhụrụ adịchaghị n'etiti-nso ulo oru na Kirin 820 | Gam akporosis
Honor X10 bu 5G nke ohuru ejiri Kirin 820 meputa: mara njirimara ya, onu ahia ya, inweta ya na ndi ozo
Sọpụrụ na-ewetara anyị ọhụụ ọhụụ, nke ekpughere n'oge na-adịbeghị anya wee bịa Nsọpụrụ X10. Nke a na-abịa na njikọta 5G yana atụmatụ adịchaghị mma nke na-akwado njirimara dị iche iche na nkọwapụta nke ọrụ na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ ịzụta ihe na-atọ ụtọ.
Injin nke ama a dị nso bụ otu n'ime chipsets kachasị ọhụrụ nke Huawei. Anyị na-ekwu maka ya Kirin 820, otu kachasị mma na igwe kachasị ike dị na ntanetị. Na mgbakwunye, maka ndị gamer ọha, enwere ihuenyo gafere ọnụ ọgụgụ ume 60 Hz a na-ahụkarị nke anyị na-ahụ n'ọtụtụ ekwentị na ahịa.
1 Ihe niile gbasara Honor X10 ọhụrụ
Ihe niile gbasara Honor X10 ọhụrụ
Iji malite, ọ ga-ahụ kwuru na ọdịdị, imewe na nwube nke ekwentị ọhụrụ a kwesiri ka ọ dị elu. Onye na-emeputa ihe na China emeela nke ọma ọzọ, na ngwaọrụ a nke na-enye ọtụtụ ihe anya, n'ụzọ dị mma, n'ezie. Ma akụkụ azụ ya, nke mejupụtara iko na-atụgharị uche na nhọrọ agba dị iche iche (ojii, acha anụnụ anụnụ, ọlaọcha na oroma), yana n'ihu na-aja anya mma.
Igwe mkpuchi Honor X10 na-akwado oke bezels n'akụkụ ọ bụla. Ọ na-etu ọnụ ihu 6.63 nke anụ ọhịa, mkpebi FullHD + nke 2.400 x 1.080 pikselụ na ume ọhụrụ dị elu nke 90 Hz, nke pụtara na panel ahụ gosipụtara ihe ruru 90 foto kwa nkeji (fps). N'ebe a anyị anaghị ahụ ụdị ọpụpụ ọ bụla ma ọ bụ oghere; Iji zere iji ihe ngwọta ndị a enwere modul retractable nke nwere igwefoto n'ihu, nke bụ 16 MP ma nwee oghere f / 2.2.
Na azụ anyị nwere igwefoto igwefoto atọ na-eji ojiji nke a 600 megapixel Sony IMX40 isi ihe mmetụta nwere oghere f / 1.8. Ihe abuo abuo ndi ozo na-eso ya bu oghere elekere 8 MP na f / 2.4 na oghere MP 2 MP na f / 2.4. A na - enye nsogbu site n'ọhịa (ọnọdụ bokeh ma ọ bụ ọnọdụ eserese). N'aka nke ya, enwere ihe ngosi LED abuo nke etinyere na ulo.
Banyere arụmọrụ, Kirin 820 ahụ e kwuru na mbụ bụ ihe nhazi nke na-ahụ maka ịnye ike na ikike niile na Honor X10 ọhụrụ. Isi chipset asatọ a nwere agglomeration atọ ụyọkọ: nke bụ isi bụ otu Cortex-A76 isi na 2.36 GHz, nke abụọ bụ isi atọ Cortex-A76 na 2.22 GHz, na tertiary bụ Cortex-A55 anọ na 1.84 GHz. Ejikọtara nke a yana Mali-G57 GPU na 6 ma ọ bụ 8 GB nke Ram, yana 64 ma ọ bụ 128 GB nke ohere nchekwa dị n'ime (gbasaa site na kaadị micro NM nke Huawei).
Batrị nke enyere ọrụ inye ekwentị mkpanaka nwere ikike nchekwa nke 4.300 mAh. Nke a na-abịa na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke 22.5 W.
N'aka nke ọzọ, Ejirila gam akporo sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 10 n'okpuru ụlọ ọrụ ime anwansi anwansi anwansi anwansi anwansi. Anyị nwekwara nhọrọ njikọta na-esote na Honor X10: 5G SA / NSA, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C na 3.5 mm jack audio connector. Enwere onye na-agụ akara mkpịsị aka nkịtị, mana ọ bụghị n'ọnọdụ dị n'azụ, mana n'akụkụ ngwaọrụ ahụ. Okwesiri ighota na ihe ndia 163.7 x 76.5 x 8,8 mm ma tụọ gram 203.
EBUP XR10 XXNUMX
IKIRU 6.63 »FullHD + IPS LCD nwere pikselụ 3.400 x 1.080
Nhazi Kirin 820
Ohere TERLỌ N'IME 64 / 128 GB
Ndị isi Azụ: 600 MP Sony IMX40 (f / 1.8) + 8 MP Wide Angle (f / 2.4) + 8 MP Macro (f / 2.4). Ugboro abụọ ikanam flash / Ihu: 16 MP (f / 2.2)
UMUAKA 4.300 mAh na 22.5 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
OS Android 10 n'okpuru Ime Anwansi UI 3.1
Njikọ Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1 / 5G
Atụmatụ ndị ọzọ Akụkụ mkpisiaka Reader / ihu gnitionghọta / USB-C / 3.5mm Jack
Mbibi na ibu ibu 163.7 x 76.5 x 8.8 mm na 203 gram
N'oge ahụ, China bụ naanị mba ebe ọ malitere ma dị ugbu a. Agbanyeghị, ọ ga-emecha rute n’ahịa mba ụwa. Ọnụahịa akpọsara ha bụ ndị a:
6 GB + 64 GB: 1.899 yuan (~ euro 244 na ọnụego mgbanwe)
6 GB + 64 GB: 2.199 yuan (~ euro 283 na ọnụego mgbanwe)
8 GB + 128 GB: 2.399 yuan (~ euro 309 na ọnụego mgbanwe)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Honor X10 bu 5G nke ohuru ejiri Kirin 820 meputa: mara njirimara ya, onu ahia ya, inweta ya na ndi ozo
Score mgbaru ọsọ site na goolu na NEO: BOL si neon-lit ọtụtụ egwuregwu